10 -ka ugu sarreeya ee Sayniska ee Shaqooyinka Bayoolaji
Raadinta inaad ka hesho shaqo faa'iido leh shahaadadaada bayoolaji, waxaan u qornay maqaalkan si aan kuu caawino. Waa kuwan Bachelor -ka ugu sarreeya ee Sayniska ee Shaqooyinka Bayoolaji ee aad heli karto sannadkan.
Waxaan nolosheena ku bixinaa hareeraha noolaha nool, laga bilaabo kuwa aadka u yar ee cabbirka iyo baaxadda leh oo aan lagu arki karin indhaha dabiiciga ah kuwa kale oo aad u weyn oo ay adag tahay in xitaa la fahmo.
Si taas loo gaaro, ninku wuxuu isu xilqaamay inuu baaro oo fahmo dhammaan waxa ku xeeran iyo nolosha gudaheeda. Xiisayntaas ayaa dhalisay heerar kala duwan oo ah barashada nolosha iyo nooleheeda. Xiisaha aadamuhu u qabo inuu fahmo nolosha ayaa ah tan keentay inuu yeesho maadooyin kala duwan kuwaas oo sii horseeday abuurista fursado shaqo oo badan.
Marka maqaalkan, waxaan ku eegi doonnaa qaar ka mid ah fursadaha shaqo ee aad heli karto markaad baranayso bayoolaji. Dhanka kale, ka eeg jadwalka tusmada dulmar guud oo ku saabsan waxa laga filayo maqaalkan.
1 Bayoolaji miyuu yahay darajo wanaagsan?
2 Maxaan ku samayn karaa shahaadada koowaad ee bayoolaji?
3 Yaa codsan kara bachelor -ka sayniska shaqooyinka bayoolajiga?
4 Sideen u codsan karaa bachelor -ka sayniska ee shaqada bayoolajiga?
4.1 Fiiri bogga internetka ee shirkadda
4.2 Raadi warbaahinta bulshada
4.3 Booqo mareegaha wakaaladda shaqaaleynta
4.4 Raadi wargeysyada shaqada
5 Bachelor -ka Sare ee Sayniska ee Shaqooyinka Bayoolaji
5.1 1. Farsamayaqaannada Cuntada
5.2 2. Mushaharka Cilmi -baarista: $ 16.26 saacaddii Kaaliye
5.3 3. Sarkaalka Xakamaynta Tayada
5.4 4. Baraha Caafimaadka
5.5 5. Shaqaalaha Xoolaha
5.7 7. Macalinka Dugsiga Sare
5.8 8. Sayniska Deegaanka
5.9 9. Cilmi -baadhe Cilmi -baadhis
5.10 10. Dhakhtarka deegaanka
7.1 27 Jaamacadaha ugu sareeya Kanada oo leh deeqo waxbarasho
7.2 13 Deeq waxbarasho oo buuxda oo ay siisay Dowlada Kanada
7.3 Gargaarka Maaliyadeed ee Kanada ee Ardayda Maraykanka
7.4 Sida Loo Helo Deeqaha waxbarasho ee Kanada ee loogu talagalay Ardayda Gudaha iyo Kuwa Caalamiga ah
7.5 Sida Loogu guuleysto Deeqaha PhD ee Kanada
Bayoolaji miyuu yahay darajo wanaagsan?
Haa. Bayoolaji waa xirfad wanaagsan oo la raaco. Runtii waa mid ka mid ah xirfadaha sayniska ee ugu macaashka badan ee aad raadin karto.
Dhab ahaantii, koorsooyinka bayoolajiga ayaa ah shahaadada koowaad ee koowaad ee ay tahay in dhakhaatiirta doonaya ay kasbadaan ka hor intaanay bilaabin dugsiga caafimaadka. Aqoonta qoto-dheer ee bayoolojiga ayaa aasaas wanaagsan u ah ardayda danaynaysa daawada.
Intaa waxaa sii dheer, shaqaalaynta dhakhaatiirta xayawaanka iyo bayoolajiyeyaasha kale ee duurjoogta ayaa la saadaalinayaa inay koraan 4 boqolkiiba laga bilaabo 2019 illaa 2029, oo ku saabsan sida ugu dhakhsaha badan celceliska dhammaan shaqooyinka.
Maxaan ku samayn karaa shahaadada koowaad ee bayoolaji?
Waxaa jira waxyaabo badan oo aad ku samayn karto shahaadadaada bayoolaji. Casharkan, waxaan ku eegi doonnaa qaar ka mid ah. Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah bachelor -ka sayniska ee shaqooyinka bayoolojiga.
Cilmiga Beeraha iyo Cuntada
Yaa codsan kara bachelor -ka sayniska shaqooyinka bayoolajiga?
Haddii aad doonayso inaad hesho shaqo bayoolaji, waa inaad buuxisaa shuruudo gaar ah kuwaas oo ah astaamo aad muhiim u ah inaad lahaato si aad u hesho xirfad guuleysata. Aan halkan ku aragno qaar iyaga ka mid ah.
Qof kasta oo ka fikiraya mustaqbal ahaan bayoolaji ahaan ama goob la xiriirta, sida iska cad waxay gacan ka geysan doontaa in dan dhab ah laga yeesho aasaaska sayniska. Haddii aad ku raaxaysato isla'egyada iyo akhrinta ku saabsan sayniska, had iyo jeer waxaad xiisaynaysaa "sababta" waxyaabaha, iyo sida inaad u hayso macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan natiijooyinka mashaariicda iyo hababka, kuwani waa calaamado wanaagsan.
Dhowr meelood oo ka mid ah barashada bayoolajiga ayaa ku lug leh sahaminta noolaha ku nool deegaanka dabiiciga ah, sidaa darteed haddii aad ku raaxaysato inaad waqti ku qaadato meelaha bannaanka ah sida kaymaha, webiyada, xeebaha, iyo deegaannada kale ee deegaanka, waxaa laga yaabaa inaad ku habboon tahay in badan oo ka mid ah laamahaas ee bayooloji.
Sida uu Dr. Maxwell tilmaamayo, dad badan oo aan qasab ahayn inay ku raaxeystaan ​​bannaanka ayaa weli u horumara sida bayoolaji ahaan marka ay keenaan xiise dhab ah oo ku aaddan qabashada shaqada shaybaarka. Xataa kuwa ka shaqeeya deegaanno dibadeed waxay wali u hurayaan xoogaa waqtigooda ah inay ka shaqeeyaan goobaha shaybaarka ee gudaha.
Dareenka Xallinta Dhibaatooyinka
Barashada bayoolojigu waa dadaal xal-u-jihaysan. Haddii shaqadu la xiriirto daawo, deegaanka, caafimaadka xoolaha, isbeddelka cimilada, ama meelo kale oo aan tiro lahayn, waxaa lagama maarmaan ah in kuwa goobta jooga ay yihiin kuwo xalliya dhibaatooyinka.
Fiiro gaar ah Faahfaahinta iyo Abaabulka
Haddii aad waligaa samaysay cilmi-baaris ama nooc kasta oo shaqo shaybaar ah, waad ogtahay sida ay muhiimka u tahay in aad si faahfaahsan loogu jiheeyo oo loo habeeyo shaqadaada.
Sideen u codsan karaa bachelor -ka sayniska ee shaqada bayoolajiga?
Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah siyaabaha aad ku heli karto oo aad u dalban karto shaqooyinka bayoolajiga.
Fiiri bogga internetka ee shirkadda
Meesha ugu horreysa ee lagu hubiyo Bachelor -ka ugu sarreeya ee Shaqooyinka Bayoolaji wuxuu ku yaal mareegaha shirkadda.
Ururada iyo ganacsiyada ayaa mararka qaarkood bixiya tilmaamo faahfaahsan oo ku saabsan cidda lala xiriirayo qaybaha sida “Shaqaalaynta,” “Xirfadaha,” ama “U Shaqee.”
Websaytka shirkadu waxa kale oo ku jiri kara taariikh nololeedka xubnaha shaqaalaha muhiimka ah ama tusaha shaqaalaha. Marka si xeeladaysan u raadi mareegaha rasmiga ah ee shirkadda qofka masuulka ka ah waxaad raadineyso.
Raadi warbaahinta bulshada
Caadi ahaan, xirfadlayaasha kheyraadka aadanaha ayaa fursado shaqo ku bixiya aaladaha warbaahinta bulshada ee caanka ah sida Twitter iyo Facebook.
Tag baarka raadinta oo bilow raadintaada adoo galaya magaca shirkadda iyo ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah sida “Bachelor of Science in Biology Jobs”.
Booqo mareegaha wakaaladda shaqaaleynta
Shirkadaha shaqaaleysiiya ayaa sida caadiga ah u sameeya dhajinta shaqada ururada. Haddii ay sidaas tahay booska aad codsanayso, tag mareegaha wakaaladda oo ka raadi bogagga shabakadda shaqsiyaadka magacyada iyo astaamaha qorayaasha.
Waxaa laga yaabaa inay ku siiyaan magacyada saraakiil gaar ah oo kaa caawin kara inaad ogaato cidda aad la xiriirayso.
Akhri: 5 Dugsiyada injineernimada ugufiican Kanada ee leh deeqaha waxbarasho
Raadi wargeysyada shaqada
Qoraallada shaqada waa beddel kale oo dad badani iska indha tiraan. Uma baahnid rukumasho si aad u hesho macluumaadkan waxtarka leh.
Ka raadi internetka joornaalada u gaarka ah warshadaha oo wax ka baro isbeddellada cusub ee shirkadda (gaar ahaan shaqooyinka la xiriira bayoolojiga).
Bachelor -ka Sare ee Sayniska ee Shaqooyinka Bayoolaji
1. Farsamayaqaannada Cuntada
mushaarka: $ 15.45 saacaddiiba
Mid ka mid ah bachelor -ka ugu sarreeya sayniska ee shaqooyinka bayoolaji ee la heli karo ayaa u shaqeeya sidii farsamayaqaan cunto. Farsamayaqaannada sayniska cuntada waxay saynisyahannada ka caawiyaan la socodka xogta, dayactirka qalabka shaybaarka, kormeerka wax soo saarka cuntada, iyo falanqaynta tayada cuntada, dalagyada, iyo carrada. Ururrada sharciyeynta iyo shirkado gaar loo leeyahay waxay shaqaaleeyaan Farsamo -yaqaanno Cuntada Cuntada u badan.
Haddii aad rabto inaad sii wadato xirfadan, shahaadada iskaashatada ee bayoolaji, dalagga ama sayniska xoolaha, kimistariga, ama anshaxa la xiriira ayaa loo baahan yahay.
2. RMushkiladda Mushaharka: $ 16.26 saacaddii Kaaliye
mushaarka: $ 15.88 saacaddiiba
Caawiyayaasha cilmi -baarista bayooloji waxay ka caawiyaan bayoolajiyeyaasha iyo saynisyahannada caafimaadka inay ururiyaan oo diyaariyaan shaybaarka noolaha sida dhiigga, cuntada, iyo jeermiska. Farsamayaqaannada bayoolojiga ayaa sidoo kale saynisyahannada ka caawiya hawlo kale oo shaybaar sida dayactirka qalabka, dukumiintiyada natiijooyinka cilmi -baarista, iyo shaqada goobta.
Shahaadada koowaad ee bayoolaji ama edbinta la xiriirta ayaa loo baahan yahay, iyo sidoo kale waayo -aragnimada shaybaarka.
3. Sarkaalka Xakamaynta Tayada
mushaarka: $ 16.26 saacaddiiba
Saraakiisha xakamaynta tayada waxay hubiyaan in badeecadaha shirkaddu ay yihiin kuwo waxtar leh oo tayo sare leh. Shirkadaha dawooyinka iyo raashinka ayaa ah kuwa ugu badan ee shaqo -bixiyayaasha farsamo -yaqaannada xakamaynta tayada. Jagadani waxay noqon kartaa kormeerida wax soo saarka ama tijaabinta alaabta laga helay ilo dibadeed. Khubaradan waxay inta badan ku takhasusaan goob gaar ah, sida cilmi baaris, hubinta tayada, ama kaydinta cuntada.
Qalinjabinta dugsiga sare ayaa loo baahan yahay, iyo sidoo kale tababbarka goobta shaqada oo socon kara bil kasta ilaa hal sano.
4. Baraha Caafimaadka
mushaarka: $ 19.76 saacaddiiba
Barayaasha caafimaadku waxay bulshooyinka baraan fayoobaanta iyo caafimaadka iyaga oo adeegsanaya khibradooda jimicsiga, nafaqada, cudurka, iyo mowduucyo kale. Barayaasha caafimaadka ayaa inta badan mas'uul ka ah ururinta iyo falanqaynta xogta ku saabsan arrimo caafimaad oo kala duwan, iyo sidoo kale horumarinta agabka waxbarashada iyo barnaamijyada tababarka.
Meelaha sida xarumaha bulshada, goobaha waxbarashada, hay'adaha caafimaadka dadweynaha, iyo xitaa ururada gaarka loo leeyahay, barayaasha caafimaadku waxay inta badan adeegsadaan isgaarsiintooda iyo kartida hoggaamineed si ay u gudbiyaan macluumaadka adag.
Shahaadada bachelor -ka waa shahaadada ugu yar ee waxbarasho ee barayaasha caafimaadka. Shahaadada Takhasuska Waxbarashada Caafimaadka ee Shahaadada leh (CHES) ayaa laga yaabaa in loo baahdo loo -shaqeeyayaasha qaarkood.
5. Shaqaalaha Xoolaha
mushaarka: $ 84,240
Haddii aad jeceshahay xayawaanka, noqoshada dhakhtarka xoolaha ayaa laga yaabaa inay noqoto koorsada adiga. Si aad u noqoto dhakhtar xoolaad, waxaad u baahan doontaa inaad buuxiso Dhakhtar Daawo Veterinary (DVM) ka dib shahaadadaada bayoolaji ee shahaadada koowaad. Haddii aad doorbidi lahayd xirfad ahaan kalkaaliso caafimaad xoolaha, waxaad ku kasban kartaa Shahaadada IV ee Kalkaalisada Caafimaadka Xoolaha.
Asal ahaan, tababbarka 24-ka bilood ah ayaa laga yaabaa inuu noqdo waxaad u baahan tahay oo dhan. Markaa sida Dhakhtarka xoolaha, waxaad ka caawin lahayd dhakhaatiirta xoolaha bixinta daryeelka xoolaha, oo aad fulin lahayd waajibaadyo kale oo kala duwan sida maamulidda dawooyinka xoolaha, nadiifinta qalabka qalliinka, iyo ilaalinta diiwaannada caafimaadka.
mushaarka: $ 28.45 saacaddiiba
Ka shaqaynta sheybaarrada sida microbiologist waa mid ka mid ah bachelor -ka sayniska ee shaqooyinka bayoolaji ee aad ka heli karto. Khabiirada cilminafsiga ayaa baaraya fangaska, fayrasyada, bakteeriyada, archea, algae, protozoa, iyo prions, kuwaas oo ah nooleyaal aad u yar oo aan lagu arki karin indhaha qaawan.
Shahaadada Bachelor -ka ee Sayniska waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku takhasusto duurka adoo dooranaya cutubyo ku habboon. Shaqada inteeda badani waxay u baahnaan doontaa daraasad jaamacadeed, laga yaabee inay noqoto heerka dhakhtarnimada (gaar ahaan jagooyinka macalimiinta jaamacadda).
Guusha qaybtani waxay u baahan tahay maskax fiiro dheer iyo xirfado gorfayn oo aad u horumarsan.
Akhri: Shaqooyinka ugu sarreeya ee 20 Gaabis ah oo tartiib tartiib ah
7. Macalinka Dugsiga Sare
mushaarka: $ 59,730
Ma rabtaa inaad barato bayoolajiga dugsiga sare? Ka dib markaad kasbato bachelor -ka sayniska ee bayoolaji, waxaad iska qori kartaa barnaamijka shahaadada Masterka ee Waxbarashada (Sare).
Bayoolaji ayaa lagu dari doonaa cutubyo maadooyin kale ah oo ku jira barnaamijka ugu fiican ee shahaadada koowaad. Xisaabta, cilmiga aadanaha iyo cilmiga bulshada, Ingiriisiga, naqshadeynta iyo farsamada, iyo farshaxanka ayaa ah tusaalooyinka aagagga barashada labaad ee xoogga la saaro haddii aad rabto inaad noqoto macallin bayoolaji.
8. Sayniska Deegaanka
mushaarka: $ 64, 532
An saynisyahan deegaanka wuxuu horumariyaa farsamo ilaalisa nidaamka deegaanka ama deegaanka caalamka. Saynisyahan deegaanka ah ayaa sidoo kale u noqon kara lataliye tallooyinka siyaasadda ee la xiriira cimilada ama deegaanka.
Shuruudaha waxbarashada: Shahaadada Bachelor-ka ee Bayoolaji ayaa kuu qalmi karta shaqada heerka gelitaanka ee maadada sayniska deegaanka. Xirfadlayaal badan, si kastaba ha ahaatee, waxay doortaan inay raacaan shaqada heerka qalin-jabinta ee sayniska deegaanka si ay u hormariyaan.
9. Cilmi -baadhe Cilmi -baadhis
mushaarka: $ 70,000
Noqoshada saynis -yaqaanka waa mid ka mid ah bachelor -ka sayniska ee shaqooyinka bayoolaji ee aad ka heli karto. Iyada oo la ururiyo lana qiimeeyo caddaymaha noolaha ee khuseeya kiis, saynisyahannada denbi -falka ayaa caawiya baaritaannada dambiyada. Saynis -yahannada denbi -baarista ayaa sida caadiga ah ku takhasusay laba meelood midkood: falanqaynta shaybaarka ama baaritaanka goobta dembiyada.
Shahaadada bachelor-ka ee sayniska dambi baarista, bayoolaji, kimistariga, ama sayniska dabiiciga ah ayaa loo baahan yahay, iyo sidoo kale tababarka shaqada.
Sidoo kale Akhri: 10 Dugsiyada Kalkaalinta Caafimaadka ee ugu Fiican Houston Texas
10. Dhakhtarka deegaanka
mushaarka: $ 73,347
Khabiir ku takhasusay cilmiga deegaanka (Environmentallogist) waa saynisyahan baaraya isdhexgalka noolaha iyo agagaarkiisa. Masuuliyadaha cilmiga deegaanka waxaa ka mid noqon kara shaqada goobta, xog ururinta, falanqaynta, iyo warbixinta. Khubaro badan oo deegaanka ah waxay xoogga saaraan noocyada halista ku jira ama deegaannada loo hanjabay. Khabiirada cilmiga deegaanka waxay ku takhasusi karaan bey'ad gaar ah, sida dhul qoyan, tundra, ama kaymo.
Waxbarashada: Si aad u noqoto Dhakhtar Ecologist, shahaadada bachelor -ka ee cilmiga deegaanka, bayoolaji, dhir, cilmiga xayawaanka, ama anshax dhow oo la xiriira ayaa loo baahan yahay. Darajooyinka sare ee la xiriira deegaanka ayaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto.
Bayoolaji ayaa u soo ifbaxay mid ka mid ah meelaha ugu badan ee sayniska casriga ah sannadihii la soo dhaafay. Noqoshada bayoolaji ahaan waa xirfad xardhan oo xariif ah. Halkaas waxaa ku jira rajooyin aad u badan. Waxaan ula jeedaa, sida iska cad, waxaad ka arki kartaa maqaalka, bachelor -ka badan ee sayniska ee shaqooyinka bayoolaji ee aad raadin karto.
Rajooyinka shaqo ee ugu fiican ayaa laga yaabaa inay leeyihiin qaar ka mid ah goobaha shaqada ee waaweyn, sida kalkaalinta, waxbarid, daawo, Farmasiga, iyo cilmiga deegaanka.
Waxaa xiiso leh in la ogaado in celcelis ahaan noolaha uu kasbado qiyaastii $ 87,000 sanad walba, sida laga soo xigtay ZipRecruiter. Oo haddii aad raadinayso inaad mid noqoto, waxaad noqon kartaa ninka ku xiga oo qaadanaya lacago aad u badan.
Previous Post:Meelaha ugu Fiican ee Dibadda wax looga barto Ardayda Sayniska Kombiyuutarka
Post Next:Muhiimada Marxaladaha Soosaarka Muusiga